FA ကျော်ကြီး မဖြစ်ရလေအောင် | သိလိုရာမေး
သမီးရည်းစား ဆက်ဆံရေး FA ကျော်ကြီး မဖြစ်ရလေအောင်
ကမ္ဘာပေါ်မှာ အတည်တကျ RS ရှိသူ ဦးရေ နဲ့ ချစ်သူကြင်သူမရှိဘဲ ဘဝကို တစ်ကိုယ်တည်းဖြတ်သန်းနေရတဲ့ FA သမားတွေ ဘယ်သူက ပိုများမယ် ထင်ပါသလဲ?
? အမေရိကန်နိုင်ငံအခြေစိုက် Washington Post ရဲ့ စစ်တမ်းတွေအရဆိုရင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု မှာရှိတဲ့ လူငယ်ဉီးရေရဲ့ ထက်ဝက်ကျော်ကျော်က ကြင်သူမရှိတဲ့ တကိုယ်ရည် တစ်ကာယသမား FA တွေပါပဲ။ ဒီတော့ လူငယ်လူရွယ် RS သမားတွေထက် အထီးကျန်သမား ကျော်ကြီးတို့ အုပ်စုက အလေးသာတယ်လို့ ပြောလို့ရပါတယ်။
ဘယ်လောက်ပဲ အလေးသာတယ်ပြောပြော… FA ဖြစ်ချင်လို့ FA လုပ်နေတဲ့သူကတော့ ရှားပြီး အခွင့်မသာလို့ FA ဖြစ်တဲ့လူတွေကတော့ များမယ်ထင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စိတ်မပူပါနဲ့… အနာရှိရင် ဆေးရှိသလို ပြဿနာရှိရင် အဖြေရှိပါတယ်။ အခု သိလိုရာမေးကနေ FA အဖြစ်များတဲ့ ကျော်ကြီး (၅) မျိုးကို ပြောပြပေးသွားမို့လို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဘယ် FA ကျော်ကြီး အမျိုးအစားထဲမှာ ပါလဲ ဆိုတာ အရင်ဆုံး စဉ်းစားကြည့်ရင်းနဲ့ အဖြေရှာလိုက်ရအောင်လား ခင်ဗျာ…
(၁) Right Woman ကို မရှာတတ်တဲ့ ကျော်ကြီး
ဒီနေရာမှာ Right Woman ဆိုတာ ရုပ်ရည်တွေ ဂုဏ်အဆင့်အတန်းတွေ မြင့်တဲ့ မိန်းမတွေကို ပြောချင်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ်ရဲ့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး၊ တန်ဖိုးထားမှုတွေနဲ့ ကိုက်ညီအပ်စပ်တဲ့ မိန်းမကို ပြောတာပါ။ ဉပမာပြောရရင် ကိုယ်က လက်တွေ့သမား ဒါပေမယ့် ကိုယ်ချစ်မိတဲ့သူက စိတ်ကူးယဉ်သမား ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင် ဒီလိုမိန်းမမျိုးက ကိုယ်အတွက် Right woman မဟုတ်ပါဘူး။ အချစ်မှာ မျက်စိ မရှိ ဆိုတဲ့အတိုင်း ကိုယ်ကတော့ နောက်မဆုတ်တမ်း တုံးတိုက်တိုက် ကျားကိုက်ကိုက် ချစ်တာပဲ။ ဒါပေမယ့် အချစ်ဆိုတာ ပေးတိုင်း ပြန်မရနိုင်တဲ့အတွက် အစွဲအလမ်းကြီးတဲ့ ကျော်ကြီးတို့ သိထားဖို့က မိန်းမအများစုက သူတို့နဲ့ Type တူတဲ့ ယောကျာ်းတွေဆီမှာ ပိုပြီး အာရုံရှိတယ်ဆိုတာပါပဲ။
(၂) ပြောင်းလဲမှုကို ကြောက်တဲ့ ကျော်ကြီး
ဒါကတော့ ခုနကပြောသလိုပဲ ကိုယ်နဲ့ မလိုက်ဖက် မအပ်စပ်တဲ့ လူကိုမှ သိရဲ့နဲ့ ချစ်မိနေမယ်။ ဒီလူမှ မရရင်တော့ မဖြစ်ဘူး ဆိုတဲ့ ထုံးကို နှလုံးမူပြီး ဒီတစ်ယောက်ထက် သာတဲ့လူကို မမြင်တဲ့ ကျော်ကြီးတွေကို ဆိုလိုပါတယ်။ အချစ်ဆိုတဲ့ အရာက နှလုံးသားက လာတယ်ဆိုပေမယ့်လဲ တခါတလေမှာ ဦးနှောက်ကလဲ လိုက်တွေးပေးဖို့ လိုပါသေးတယ်။ လူ့ဘဝ တိုတိုလေးမှာ ကိုယ်နဲ့ ကီးမကိုက်တဲ့လူဆီကို အချစ်တွေ၊ မေတ္တာတွေ ပုံအောပေးနေမယ့်အစား ကိုယ်ပေးရတဲ့ အချစ်အတိုင်းအတာနဲ့ ညီတဲ့ တခြားသူတစ်ယောက်ကို ရှာဖွေသင့်ပါတယ်။
(၃) သံသယများလွန်းတဲ့ ကျော်ကြီး
“ဒီလောက် အသက်ငယ်တဲ့ ကောင်မလေးနဲ့တော့ ငါမဖြစ်ပါဘူးကွာ” ဆိုတာမျိုး “သူက ဒီလောက်ချောတာ ချစ်သူရှိရင်ရှိနေမှာပေါ့… ငါ့လိုကောင်မျိုးကို ကြိုက်ပါ့မလား?” ဆိုတဲ့ အတွေးမျိုးတွေရှိနေပြီလား? ဒါဆိုရင်တော့ ချိဖက ကိုယ့်အတွေးတွေနဲ့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပိတ်လှောင်ထားတဲ့ FA ကျော်ကြီးဖြစ်နေပါပြီ! သိထားမှာက ကိုယ်ကြိတ်ချစ်နေတဲ့ မိန်းကလေးက ကိုယ့်ထက် အသက်ငယ်တာ… ရုပ်ရည်ချောမောတာ တွေကို ထည့်တွေးပြီး အူကြောင်ကြောင်နဲ့ ထိုင်ငိုင်နေမယ်ဆိုရင်တော့ သူများက ဆွဲစားသွားပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ အတွေးလွန်နေတာတွေကို လျှော့တန်သလောက် လျှော့ပြီး ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင် အတွေးလွန် FA ကျော်ကြီးအနေနဲ့ အနည်းဆုံး တစ်ခေါက်လောက်တော့ ကြိုးစားကြည့်သင့်ပါတယ်။
(၄) မိန်းမတွေကို ပုံသေသတ်မှတ်တတ်တဲ့ ကျော်ကြီး
ဒါကတော့ မိန်းမတွေကို “ဘယ်သူကတော့ ဘယ်လို” ဆိုပြီး စိတ်ထဲမှာ ပုံသေကားချပ်အတိုင်း သတ်မှတ်နေတတ်တဲ့ ကျော်ကြီးကို ဆိုလိုပါတယ်။ ကိုယ်က စိတ်ထဲက ကြိတ်ပြီး စိတ်ဝင်စားနေပေမယ့်လဲ “ဒီမိန်းမ ပုံစံက ခေါင်းမာပြီး ပြောရဆိုရခက်မယ့် ပုံမျိုး” “ဒီတစ်ယောက်ကလဲ ပိုက်ဆံမက်မယ့် ရုပ်နဲ့” အစရှိသဖြင့် တွေးတတ်တယ်ဆိုရင်တော့ သင်က Negative ကျော်ကြီး ဖြစ်မှန်းမသိ ဖြစ်နေပါပြီ။ ပြောချင်တာက ဘယ်မိန်းမကိုမှ အပြင်ပန်းပုံစံ ပြောပုံဆိုပုံကို ကြည့်ပြီး ဒီလို တထစ်ချ သတ်မှတ်လို့မရပါဘူး။ တခါတလေမှာ မိန်းမတွေက အချစ်နဲ့ မတွေ့ခင် အချိန်မှာ ပုံစံတစ်မျိုးဖြစ်နေပေမယ့် အချစ်နဲ့ တွေ့တဲ့အခါမှာ အရည်ပျော်ပြီး ယောကျာ်းတွေနဲ့မတူဘဲ အချစ်ကို ခံစားတုန့်ပြန်လွယ်တဲ့ သဘာဝရှိတတ်ပါတယ်။ ဒီတော့ တွေ့လိုက်တာနဲ့ ဘာဆိုပြီး ကောက်ချက်မချခင် အရင်ဆုံး ကိုယ်ချစ်တဲ့သူနဲ့ စကားပြောပါ… အချိန်တူတူ ကုန်ဆုံးပြီး သူ့စိတ်သဘာဝအမှန်ကို လေ့လာကြည့်လိုက်ပါအုံး ကျော်ကြီးတို့…
(၅) လိုချင်လွန်းလို့ ငမ်းငမ်းတက်ဖြစ်နေတဲ့ ကျော်ကြီး
ဒီနောက်ဆုံး ကျော်ကြီးကတော့ ရင်နာစရာအကောင်းဆုံး FA ကျော်ကြီး အမျိုးအစားလို့တောင် ပြောလို့ရပါတယ်။ သူ့ခမျာ ရည်းစားကလဲ လိုချင်… လိုချင်လို့လဲ အကောင်အထည်ဖော်ပေမယ့် မရတဲ့ ကျော်ကြီးတွေပါပဲ။ ဒီလို ကျော်ကြီးတွေက အများအားဖြင့် သူချိန်လိုက်တဲ့ မိန်းကလေးတွေကလဲ ချိန်ပါဖြစ်ရင်ဖြစ်၊ မဖြစ်ရင် သူချစ်တဲ့ မိန်းမတွေက ကိုယ့်ကို ဖုတ်လေတဲ့ ငါးပိရှိတယ်တောင် မထင်တတ်ကြပါဘူး။ အမှန်အတိုင်းပြောရရင် ယောကျာ်းလေးတွေတောင်မှ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို လွယ်လွယ်နဲ့ လိုက်လို့ရရင် အညှာလွယ်တယ်လို့ ပြောတတ်ကြသေးတာပဲ။ တခါတလေမှာ မိန်းမတွေဘက်က ကြည့်ရင် ဒီလို ကျော်ကြီးတွေက လွယ်လွယ်ကူကူ ရတဲ့ အပေါစားလိုမျိုး ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ ကျော်ကြီးအနေနဲ့ ချေသင့်သလောက်ချေပြီး အချစ်နောက်ကို မရပ်မနားလိုက်နေတာမျိုးတွေကနေ ခဏလောက်တော့ Break ယူသင့်ပါတယ်။ ဒီလို အချစ်ကို ခဏမေ့ထားတဲ့ အချိန်ကာလမှာ ကိုယ့်ကိုကိုယ် အရာရာမှာ ပိုကောင်းတဲ့ လူ ဖြစ်အောင် ကြိုးစားသင့်ပါတယ်။
ကဲ အခု ချိဖတို့အနေနဲ့ အတွေ့များတဲ့ FA ကျော်ကြီး (၅) မျိုးကို သိသွားပြီဆိုတော့ အမှားကို သိ အမှန်ပြင်နိုင်ပြီး FA ဘဝကနေ အမြန်ဆုံး ကျွတ်ပါစေကြောင်း သိလိုရာမေးကနေ ဆုတောင်းပေးလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ…